“Mbappé wuxuu ku biiri doonaa Real Madrid goor dhow ama goor dambe” – Benzema – Gool FM
“Mbappé wuxuu ku biiri doonaa Real Madrid goor dhow ama goor dambe” – Benzema
Dajiye September 5, 2021
(Madrid) 05 Sebt 2021. Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Kylian Mbappé uusan imaanin Los Blancos xilli ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa isku dayday inay la soo saxiixato xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska maalmihii ugu dambeeyay ee suuqii xagaaga, laakiin Paris Saint-Germain ayaa diiday inay ka tagto, taasoo dib u dhigtay riyadii Real Madrid ilaa sanadka dambe.
Benzema ayaa u sheegay Telefoot: “Waxaan jeclaan lahaa in Mbappé uu u saxiixo Real sanadkan, laakiin waan ogahay inay taasi dhici doonto goor dhow ama goor dambe, wuxuuna noqon doonaa ciyaaryahan Real Madrid ah.”
“Real Madrid waxay dooneysaa inay la saxiixato, taasina sir ma ahan.” Ayuu yiri Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema.
Carragher oo saadaaliyay mustaqbalka Salah kaddib shuruuda adag uu hordhigay Liverpool si uu qandaraaska ugu kordhinayo
RASMI: Xiriirka CONMEBOL oo xaqiijiyey in la joojiyey oo lagu kala dareeray kulankii u dhexeeyey xulalka Brazil iyo Argentina daqiiqo yar kaddib markii la baastay... (Maxay tahay sababtu?)